Famolavolana natao ho an'ny faharanitan-tsaina: Logos Ji Lee 31 tsy maintsy ananana | Famoronana an-tserasera
Misy ny teny sy ny hevitra afaka manome antsika lalao sy sary amin'ny teny amin'ny fomba somary tsotra. Ohatra tsara ny safidy izay entiko ho anao anio. Andian-tolo-kevitra avy amin'ny mpamorona Koreana Ji Lee izay nahatonga azy hahazo fankasitrahana be dia be tamin'ny Internet ary tsy mahagaga izany. Ny fiarahan'izy ireo dia nivadika ho matanjaka sy manaitra ampy hahazoana ny maso sy ny fotokevitra momba azy ireo. Ny tena marina dia raiki-pitia tamin'ny tetikasan'izy ireo aho, toa marani-tsaina izy ireo, vaovao ary am-boalohany.
Azoko antoka fa ireo logo ireo dia hanaitra ny fahaliananao hahafantarako anao fa afaka mahita bebe kokoa an'ity mpanoratra ity amin'ny tambajotran-tserasera (Facebook, Instagram y Twitter) na mivantana ao amin'ny anao pejy ofisialy. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra ahy dia holazaiko aminao fa izy dia tia lalao bisikileta, jazz ary teny, na dia hita miharihary aza ity farany.
Ny herin'ny hery misintona dia aseho antsika ara-bakiteny rehefa milatsaka eo ambanin'ny lanjan'izy ireo eo imasontsika ny litera.
Ny fidirana sy ny fivoahan'ny tionelina iray dia azo faritana tsara amin'ny "n" avo roa heny amin'ny teny anglisy.
Taratasy manitatra sy mitombo eo alohantsika amin'ny fomba mahavariana fa ny sisa amin'ireo litera mandrafitra ny teny dia toa tsy mahay mandanjalanja sy osa.
Ny taratasinay X dia lasa zavamananaina ary mandositra ny teny hoe Fivoahana hatrany amin'ny farany lavitra, raha toa ny varavarana kosa dia toa varavarana misokatra aho.
Ny hakitroky sy ny vatan'ireo litera mandrafitra ny teny hoe sakafo haingana dia mitombo amin'ny fomba mitovy amin'ny vatan'ny mpanjifa ity sakafo ity.
Narary dia midika hoe marary, eto no ahitantsika ny fanehoana ny teny amin'ny alàlan'ny saribakoly mijanona eo am-pandriana.
Ny litera G mizara roa dia maneho ny fihenan'ny mpihira teo amin'ny sofina.
Nivadika ambony ambany ny litera voalohany, diso hevitra mora foana ho toy ny teboka fiantsoana na olona mivadika, izay samy famantarana ny famoronana, ny hakingan-tsaina ary ny fihetsem-po amin'ny fizotry ny famoronana.
Robbey adika amin'ny fandrobana. Ara-bakiteny ny litera E miantsona ny Y.
Ny tsiky (tsiky) dia misolo tena amin'ny alàlan'ny fitambaran'ireo litera i sy l mba hamoronana emotikaly mipitrapitra sy mitsiky.
Ny famolahana ny litera S dia ampiasaina hanehoana ny endrika mihetsiketsika ao anaty onjan-dranomasina.
Iray amin'ireo tiako indrindra! Ny V sy ny A dia famantarana sy fiakarana miakatra na fidinana amin'ny bokotra misy ny ascenseur rehetra.
Ny litera S dia nanapa-kevitra ny handao ny toerany satria laharana faha-13, miresaka finoanoam-poana izahay, inona no antenainao?
Fomba iray anehoana sary vetaveta ny firaisana ara-nofo amin'ny lafiny rehetra.
Ny rambon'ny litera R dia miseho tampoka, mampatsiahy ny fomban-dralehilahy naka rano ary avy eo dia nanantitrantitra fa any amin'ny faritry ny lehilahy izahay (amin'ny fomba somary masiaka).
Ny voalohany O dia mampiseho amintsika ny filentehan'ny masoandro ara-bakiteny ary ny faharoa dia ny fisehoan'ny volana eo amin'ilay sehatra.
Ny litera dia apetraka eo an-tampon'ny fakana tahaka ny endrik'ilay bisikileta.
Ny mahazatra, ny T ny teny hoe fitsarana mitongilana toy ny mizana, ny tandindon'ny quintessential ny fahamarinana.
Whiplash dia midika hoe whiplash, noho izany dia azontsika atao ny maminavina fa ny litera I dia maneho ny karavasy nikapohana ny litera P. Somary mampalahelo ihany.
Ny litera M dia mihantona ambony amin'ny tranokalan'ny hala mitovy amin'ny maherifo.
Ny C voalohany dia mandrakotra ny tenintsika iray manontolo toy ny hoe kapaoty.
Ity dia tsy mila fanamarihana firy, sa tsy izany?
Ny fihoaran'ny litera C sy D dia ampiasaina hanehoana hatsikana (tsiky) sy tantara an-tsehatra (alahelo malahelo)
Mazava ho azy koa ity ka aleo tsy maneho hevitra momba izany aho.
Ny taratasinay O dia miasa ho aotra ihany koa hanehoana ny fiakaran'ny vidim-piainana ara-maso.
Miseho maneho ny planeta tany sy ny volana amin'ny lafika mainty ny roa an'ny O antsika.
Ny fahitana ny teny hoe silikônina vita amin'ireo endrika boribory roa ireo (d + o misokatra) dia ampifandraisintsika haingana amin'ny fiasa tsara tarehy sy ny tratra vehivavy.
Ny endriky ny zipper dia miorina amin'ny firaisan'ny renivohitra E's. Mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Volavola namboarina tamin'ny saina: 31 logo Ji Lee tsy maintsy ananana
Fanazavana fotsiny, Whiplash no anaran'ny tapa-mozika jazz noforonin'i Hank Levy ary ny logo dia manondro ny amponga, maneho ny lokanga ampongatapaka sy kipantsona izany.
Tsy fantatro, misaotra ny fandraisana anjara David, arahaba!